Ciyartooy Kamid aha Xulka Qaranka Xiligii dawladii Siyaad bare oo Isku Bedelay Kuug Ducooyinka Loo Kiraysto | Biyoguurenews.com
Home Wararka Ciyartooy Kamid aha Xulka Qaranka Xiligii dawladii Siyaad bare oo Isku Bedelay...
Ciyartooy Kamid aha Xulka Qaranka Xiligii dawladii Siyaad bare oo Isku Bedelay Kuug Ducooyinka Loo Kiraysto
Muxyaddiin Cambar Khamiis oo ay da’diisu tahay 60-dameeyo wuxuu ahaa ciyaartooy hore oo kooxa badan oo dalka Soomaaliya ka jiray u soo ciyaaray kooxahaasi oo ay ka mid aheed xulkii qaranka xiligii nabdda.
Haddana wuxuu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya isaga oo howlihi ciyaaraha iska joojiyey daruufo jiro awgood wuxuuna hadda noolal maalmeedkiisa uu ka raadsadaa cunta karinta iyada oo xafladaha sida aroosyada, matiqaadyada, iwm ah looga yeero si uu cuntooyinka ugu kariyo.
Muxyaddiin oo u warramay wariyaha BBC-da Xasan Shekh Cumar ayaa wuxuu uga warbixiyey waayihiisa noolaleed ee ciyaaraha iyo xaaladda uu hadda ku sugan yahay.
Waxaanna uu Muxyaddiin sheegay “inuu ciyaaraha uu ku billaabay naadiga waxool oo loo yaqaannay wasaaradda xannaanada xoolaha dhirta iyo daaqa sanadka markuu ahaa 1977-kii, 1978-kiina uu ka mid noqday xulki loo xulayey gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho, xilligaasina ay galeen kaalinti labaad ee ciyaarihi gobollada .”
“1980-kIina waxaaan ka mid noqday xulkii qaranka Soomaaliyeed oo markaa tababara ay noo ahaayeen macallin jarmal ah iyo allaha u naxariistee Macallin Cumar Canjeeste, 1980-kii haddana waxaan ka mid noqday oo dib la iigu soo celiyey kooxda xulka qaranka ee Junior-ka oo aan kabtan ka noqday kuna guuleysannay koobka loo dhigay bariga iyo bartmaha Afrika” ayuu yiri.
Muxyaddiin Cambar Khamiis isaga oo ka mid ah xulka qaranka ee Soomaaliya wuxuu ka soo ciyaaray tartamo caalami ah oo lagu soo qabtay waddamo badan.
Tartannada caalamiga ah uu ka qayb galay isaga oo dalkiisa matalaya wuxuuna Muxyaddiin uu ka dhaxlay magac iyo sumcad aad u weyn inuu ku yeesha dalka gudahiisa balse, nasiib darro waxaa riyooyinkiisa kala dhantaalay dagaalladi sokeeya ee dalka Soomaaliya ka dhacay wuxuuna u soo qaxay dalka Kenya oo Soomaali badan oo qoxooti ah ay ku sugan yihiin.
Hadda wuxuu Cambar uu ku nool yahay xaafadda islii ee magaalada Nairobi wuxuuna noolashiisa uu ka soo saartaa shaqo wakhtigu baday.
Hadda waxaan qabtaa oo aan noolasheyda ka soo saartaa aroosyada oo aan cuntada u kariyaa, xirfaddaasina waxaan bartay markii uu burburku dhacay danta ayaana i bartay” ayuu yiri Muxyaddiin.
Maxammed Cali wuxuu ka mid ah dadka Cambar cunta karinta ugu yeerta ayaa BBC-da u sheegay in Cambar ciyaartooy hore lagu xushmeeyo shaqadiisa.
“Laba siyaaboodba magac ayuu ku leeyahay Cambar markiisa hore wuxuu ahaa nin magacweyn ku leh dhinaca Isboortiska aadna looga yaqaanno, sida oo kale xafladaha waaweyn ee ka dhaca magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii waa ninka ugu magacaweyn oo kariyo cuntooyinka” ayuu yiri Maxammed.
Muxyaddiin Cambar Khamiis isaga oo aad u qiireysan wuxuu si weyn uu iisu barbar dhigay sumacadda iyo qaddarinta uu dalkiisu ku haystay bari samaadka oo dalkiisa ciyaartooyga ka ahaa iyo xaalka sida uu maanta yahay.
“Noolashaas iyo noolasha hadda wax isku mid ma aha nin dowlad iyo qaran lahaa iyo nin maanta qaranka ka dumay oo xilli dalka uu nabadda ahaa baska aan saaranahay calan ayaa ka hor babban jiray moota tirafik saran yahay ayaa I horsocon jirtay xataa la iima oggoleyn inaan keligeey socdo markaan dibadaha imaanno waan nala waardiyeyn jiray waa nala hoggaamin jiray.”
“Balse maanta waxaan ahay nin dalkiisi uu burburay dadkiisana daafaha dunida u kala cararay isku mid ma aha runti” ayuu yiri Camber.
Inkasta oo Muxyaddiin Cambar Khamiis uu sheegay inuu muddo qoxooti ku soo ahaa dalka Kenya iyo noolasha adag haddana wuxuu sheegayaa inuusan rajadiisa hoos u dhigin oo uu rajeeynayo inuu markale arko Soomaaliya oo sideedi hore ku soo noqota.
“Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahey Soomaaliya iisu keeno oo sida aan ahaan jirnay iyo si ka sii fiican aan noqonno, waxaanna qabaa mar haddii ay soo noqoto rajada in sidi hore la iska jeclaan doonaan maadamaa ay soo arkeen qurbo waxa uu yahay iyo inuu dal shisheeya ku anfaceyn intaba ayuu yiri Muxyaddiin Cambar Khamiis.
Previous articleWasaarada Macdanta Oo Ku Dhawaaqday Magacyada Shaqaalaha Loo Qaadayo Imaaraadka
Next articleWasaiir Faratoon Oo Ka Hadlay Inay Is arkeen Madaxawynaha Butland iyo In kale